Mikana Yekuzvipira - Galveston County Chikafu Bhangi
Uri kutsvaga kudzosera kunharaunda here?
Zvipire nhasi kuita mutsauko muhupenyu hwevavakidzani vako!
Matanho ekunyoresa kune anozvipira mukana online.
1. Dzvanya iyi link yeyedu SignUp.com peji pazasi.
2. Sarudza zuva raunofarira.
3. Sarudza mukana wekuzvipira waunoda kutora chikamu mauri.
4. Dzvanya bhatani reGreen Sign Up kuti unyore. (Kana bhatani riri grey saka nzvimbo yekuzvipira yatove yakazara).
5. Tevedza anotevera matanho kupedzisa kunyoresa maitiro.
Dzvanya apa kuti uwane yedu SignUp.com Peji
Dhawunirodha iyo Volunteer Liability Waiver Fomu
Unoda rubatsiro here? Fonera anozvipira Murongi kuti uwane rumwe ruzivo pa (409) 945-4232 kana email pa Vol.
Dare Rakarairwa Community Service
Imhosva dzipi dzisingagamuchirwe?
GCFB haigamuchire Zvinosanganisira Zvinodhaka, Kuba, kana Mhirizhonga.
Kune here kurambidzwa kwezera?
Iyo yekudzivirira zera inoenzaniswa neGCFB's Volunteer Zvinodiwa (11+)
Ndeapi mapepa anodikanwa?
Mapepa ekutanga kubva kuDare uye / kana Probation Officer anofanirwa kupihwa kuMuzvipiri Murongi kuti aone mhosva uye kuti kopi iiswe mufaira revashandi.
Ndokumbirawo upedze fomu pazasi.
Dare Rakagadzwa Nharaunda Yebasa Chibvumirano 2020
Ndiani waunogona kutaura maererano nebasa renharaunda?
Bata iyo Volunteer Coordinator neemail, volunteer@galvestoncountyfoodbank.org kana kufona 409-945-4232.
Chero imwe info inodiwa?
Ose maDare-Akagadzwa maVazvipiri anodikanwa kuti vauye muhofisi ivo pachavo kuti vaone pfupi. Iko kutarisisa kunosanganisira kuzadza iyo Community Service Fomu, kusaina iyo GCFB Waiver, kugadzira Sign-In Sheet, uye kudzidziswa maitiro ekusaina kusaina.
Pane here chero kodhi yekodhi inodikanwa?
Hapana mbatya dzakasununguka kana dzakasungwa
Hapana zvishongo zvakarembera (zvishongo zvemumaoko, mitsipa mirefu kana mhete)
Hapana mafiripi, shangu kana shangu dzinotsvedza
Hapana shangu dzisina musana (ex: manyurusi)
Yakavharwa zvigunwe shangu chete
Pasina kupfeka kana kuratidza zvipfeko
Sleeve hembe chete
Hapana tangi misoro, spaghetti tambo yepamusoro, kana tambo isina tambo.
Chii chinodiwa kuronga boka rekuzvipira mukana?
Pedzisa fomu rezvipiri rekutora chikamu uye wobva waendesa kune Wazvipira Coordinator kuti atenderwe.
Fomu reVazvipiri Chekuita Chikamu
Pane mamwe mafomu anodikanwa here?
Munhu wega wega weboka anoda kuzadza fomu rekuregerera rekuzvipira.
Kuzvipira Liability Waiver fomu
Vangani vanhu vanoonekwa seboka?
5 kana vanhu vazhinji pamwechete vanoonekwa seboka.
Ndeapi saizi yakakura yemapoka anotenderwa?
Panguva ino, hapana hukuru hwakakura hwemapoka asi zvichasiyana nekuvhurika kuwanikwa. Kana paine boka rakakura chaizvo, isu tinokamuranisa iro boka kuita mapoka madiki kubatsira munzvimbo dzinoda (kureva, chikafu chekudya, kurongedza, Kid Pacz, nezvimwewo)
Vazvipiri vanofanirwa kuve vangangoita makore gumi nerimwe ekuberekwa kana kupfuura.
Isu tinoda angangoita 1 mukuru / chaperone pagumi vadiki. Vakuru / vatungamiriri vanofanirwa kutarisa vadiki nguva dzese.
Ko kana boka rangu risingakwanise kuenda kudheti redu rekuzvipira?
Ndokumbira utumire email kune anozvipira murongi nekukurumidza sezvinobvira kusunungura iwo mavara, saka vamwe vanogona kuzvipira nesu.
Vanofamba-famba vanogamuchirwa here?
Hongu, vanozvipira vanofamba vanogamuchirwa Chipiri - China 9am kusvika 3pm uye Chishanu 9am kusvika 12pm.
Ndokumbira kuti muzive kuti edu ekuzvipira nzvimbo anozadza nekukurumidza uye zviri nani kuronga online.
Dzvanya Pano Kunyoresa
Vazvipiri vanofanirwa kuve vangangoita makore gumi nerimwe ekuberekwa kana kupfuura. Vana vane makore gumi nemasere kusvika gumi nemana vanofanirwa kuve nemunhu mukuru varipo vachizvipira. Vana vane makore 11-11 vanofanirwa kuve nevabereki / muchengeti mvumo pane vanozvipira waiver fomu.
Isu tinogamuchira mazuva ekuzvipira eboka! Tinogona kuronga vashandi vako, boka rekereke, kirabhu kana sangano pakukumbira. Tarisa uone mazuva akavhurwa pane yedu SignUp.com peji uye kana ivo vasina kukodzera yako purogiramu email isu kuti tione izvo zvinogona kumisikidzwa zveboka rako.
Dzvanya Pano Kuti Utore Fomu reVazvipiri Rekutora Chikamu
Tine chikafu chinogoverwa paternsite patry yedu muTexas City Chipiri chega chega, Chitatu, China kubva 9am kusvika 3pm uye Chishanu kubva 9am kusvika 12pm. Isu tinowanzoda vangangoita gumi vanozvipira kuti vabatsire mupantry. Wedu anozvipira anoda shanduko kazhinji, saka ndokumbira utarise yedu SignUp.com peji kazhinji.
Kune nzvimbo dzemugovera dzekuzvipira dzinovhurwa kubva 9am kusvika 12pm. Ndokumbirawo unyore pachine nguva. Tinoda kuva nevanozvipira makumi maviri pavhiki. Iyo 20nd Mugovera wemwedzi wega wega uri kugadzirira Mabhokisi ekuMusha, ayo anoenda kune vakwegura nevakaremara vasingakwanise kuuya kwatiri kuzobatsirwa.
Tine chishuwo chepamwedzi cheumwe munhu angade kuve nemukana unozvipira wekutora Mabhokisi Ekumusha evakuru nevakaremara muGalveston County. Uyu mukana kamwe chete pamwedzi wekuzvipira uye vanozvipira vanofanira kupedzisa cheki yekumashure. Bata Kelly Boyer pa Kelly@galvestoncountyfoodbank.org mamwe mashoko.
Isu tinopa Island kuzvipira pamwe neGalveston College - Chikafu chePfungwa Chirongwa. Vazvipiri ava vanofanirwa kuzadza cheki yekumashure pasina muripo. Izvi zvinoda kupedzwa mazuva matatu zuva rekuzvipira risati rasvika. Ndokumbirawo ubate Volunteer Coordinator yepashure yekutarisa fomu, Vol
Ndokumbira utarise peji redu reSignUp.com Kubvumbi kusvika Chikumi kubatsira nepurogiramu yedu yeKidz Pacz yevana yekudya yezhizha.
Kana iwe ukashinga kutyisidzira, isu tine iyo Haunted Warehouse mikana yekuzvipira mukati memwedzi waGumiguru. Bata Julie Morreale pa Julie@Galvestoncountyfoodbank.org
Joinha isu mukutungamira kurwira kupedza nzara kuGalveston County.